‘नेपाली सेक्स गर्न जान्दैनन्’ - Tesro Ankha
नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन । यौनबारे जति चर्चा गरिन्छ या त त्यसलाई असाध्यै जटिल बनाइन्छ या अति नै हलुका । फलस्वरूप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जित विषय । यो गम्भीर विषयमा मनोविज्ञ करुणा कुँवर भने प्रस्ट छिन् ।
रेखा थापाले कम वस्त्र लगाउँछिन्, त्यसकारण उनी सबैभन्दा बढी यौनइच्छा भएकी महिला हुन् र गाउँले युवती लजाउँछिन्, त्यसैले उनमा यौन इच्छा छैन भन्ने होइन । फ्रायडले धेरै अघि मानिसका सबैजसो क्रिया यौनमा आधारित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि फ्रायड पढेको नेपाली बौद्धिकवर्गले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । यो गम्भीर विषयमा मनोविज्ञ कुँवर भने प्रस्ट छिन् । नेपालीको यौन व्यवहार एवम् त्यसले सिर्जना गरिरहेको तनावले धेरै युगल जोडीको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्दै गएको उनको अनुसन्धानले देखाएको छ । जर्मनी मनोवैज्ञानिक दोरोभी वे नरकी शिष्य करुणासँग नेपालीको यौन मनोविज्ञानका विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंलाई फेमिली थेरापिस्ट भन्दारहेछन्, मनोविज्ञानभित्र फेमिली थेरापी कहाँ पर्दाेरहेछ ?
तपाईंसँग उपचारका लागि धेरै युगल जोडी आउने गरेका छन्, युगल जोडीका मुख्य समस्या के–के रहेछन् ?
नेपालीको यौन क्रियाकलाप कसरी हुँदोरहेछ, समस्या के पाउनुभयो ?
नेपाली महिला सेक्समा रमाउन नसक्नुका कारण के पाउनुभयो ?
कतिपय युगल जोडी धेरै झगडा गर्छन्, यस्तो लाग्छ, उनीहरू तुरुन्तै छुट्नेवाला छन् तर वर्षौंसम्म पनि उनीहरू सँगै हुन्छन्, यसको कारण के होला ?
यसको कारण पनि सेक्स नै हो । तपाईं हामी सबैले दर्जनौँ यस्ता जोडी देखेका छौँ, जो यति झगडा गर्छन्, कुटाकुट गर्छन् कि भोलि नै छुट्न सक्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । वास्तवमा उनीहरूलाई छुट्टिन नदिने कारण सेक्स नै हो । सेक्सका बेला यी दुईबीच जुन प्रेम प्रकट हुन्छ, त्यो छुट्टिसकेपछि नपाइने मनोविज्ञानका कारण उनीहरू जे–जस्तो सहेर पनि बसिरहेका हुन्छन् । सेक्सका समयमा शारीरिक सुगन्ध एक–अर्काले वर्षौंसम्म पाएका हुन्छन्, छाला–छालाबीचको घर्षण प्रिय हुन्छन् । कतै न कतै त्यो प्रिय क्षण मनको अन्तरमा बसेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई छुट्टिन दिएको हुँदैन । एक लेखकले कतै भनेका छन्, ‘नजिकै प्रहरीचौकी छ, सहयोग गर्ने वकिल छन्, प्रशस्त कानुन छन्, यद्यपि एउटी महिला पुरुषको यातना खेपेर वर्षौंदेखि बसिरहेकी छे । किन ? किनभने ऊ त्यो व्यक्तिको सेक्समा रमाएकी छे ।’
नेपालका सहरी क्षेत्रमा महिला–पुरुष सेक्समा उदार हुँदै छन्, यससँगै सेक्समा विभिन्न प्रयोग पनि भएको सुन्न पाइन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
विवाहको केही वर्षपछि पुरुष आफ्ना श्रीमतीको यौनचाहना कम भएको गुनासो गर्छन् । उनीहरू परस्त्रीगमन गर्न थाल्छन्, फलस्वरूप परिवार नै विखण्डनको अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । यसको खास कारण के हो ?
नेपालमा एकथरी महिला छन्, जसका लागि यौन लाजको विषय हो, तर अर्काथरी महिला यस्ता पनि छन्, जो खुला रूपमा सेक्सका कुरा गर्छन् र आफ्नो स्तनलाई नै आकर्षणको केन्द्र बताउँछन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली किन यति हिप्पोक्र्याट भएका ?
अहिलेको नयाँ पुस्ता घरमा यौनलाई गलत भनेको सुन्छ तर इन्टरनेट र साथीभाइका माध्यमबाट सबै कुरा सिकिसक्छ, यस्तो अवस्थालाई कसरी मिलाउने ?
२०७४ कार्तिक ५ ००:०९